ब्रिटिस लाहुरेको बुढीलाई मज्जाले चिकियो, दस हजार पनि कमाइयो
मेरो नाम हरी हो । कुरा आजा भन्दा3बर्ष पहिलेको हो म कुनै कामको सिलसिलामा काठमाण्डौ आएको थिएँँ । पौष महिना भएकोले काठमाण्डौमा निकै जाडो थियो म पनि जाडोको सदुपयोग गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अलि रक्सी पिएको थिएँँ । साँझ भइसकेको थियो म रक्सीको नशामा मातेर आफु बस्ने होटेल तिर जादै थिएँँ । रक्सीको नशाले गर्दा होला मेरा खुट्टा अलि थिरमा थिएनन् । अझै त्यसमाथी बागबजारका साँघुरा गल्ली नशाले गर्दा मलाई त्यस्तो जाडोमा पनी त्यस्तो केही अनुभब भएको थिएँन ।
साँझ भइसकेको थियो । गल्लीहरुमा सडक बत्तीको मधुर प्रकाश आइसकेको थियो । त्यत्तिकैमा मेरो पछाडी कुनै गाडीले हरन बजायो । मैले पनि साइड छोडीदिएँ । गाडी म भन्दा केही अगाडी गएर रोकियो । म आफ्नै तरिकाले हिडिरहेको थिएँँ । जब म गाडीको नजिकबाट जादै थिएँ गाडीबाट हेलो भन्ने शब्द आयो । म त्यसको केही वास्ता नगरी आफ्नो सुरमा नै हिडीरहेको थिएँ । यत्तिकैमा पुनः आवज आयो hello… म पछी फर्केर हेरे गाडीमा कुनै आर्धबैसे महिला टाउकोमा कालो चश्मा राखी मलाई ईशार गरेको देखेँ । म गाडीको नजीक गएँ । उनले मलाइ गाडीको ढोका खोल्दै कहाँ जाने आउ म पुर्याइदिन्छु भन्दै थिइन । म केही सोँचमा परे, कोही गुण्डाको लिडर त होइन ? या त कि त मलाइ लुट्ने प्रयास त होइन तर उनको शरीर अनि उनको पहिरन देख्दा त त्यस्तो छैन तै पनि म मनमा यस्तै यस्तै कुरा मनमा आइरहेको थियो । यसैबिच हेलो के सोचेको I am Rajani भन न म पुर्याइदिन्छु । मैले भनेँ - "होइन हजुरले दुखः गर्नु पर्दैन मेरो कोठा यहि नजिक नै हो, म आफै गइहाल्छु नी" । यत्तिकैमा उनले भनिन् होइन डराउनु पर्दैन म पुर्याइदिन्छु बस न किन डराएको मैले उनको कुरा टार्न कुनै बाटो पाइन । म उनको गाडीमा बसेँ । उनले गाडीको सिसा बन्दा गर्न आग्राह गर्दै मेरो नाम सोधिन । मैले पनि मेरो सबै कुरा बताइदिएँ । मैले पनी उनको बारेमा सोधेँ । उनी ब्रिटीस लहुरेकी श्रीमती रहेछिन् । उनको उमेर २५ बर्ष भएको रहेछ र बिहे गरेको अहिले ६ बर्ष भइसकेको रहेछ र श्रीमान २ बर्षमा एक पटक घर आउने रहेछन् । अझसम्म उनीहरुको बच्चाहरु भने रहेनछन् । यति कुरा गर्दा हामीहरु करीब १० मिनेटको बाटो काटिसकेका थियौँ । मैले उनलाइ यहीँ रोक्नुस भनी आग्रह गरेँ । मेरो होटेल यही हो फेरी फेरी मौका मिलेमा भेटौला भन्दै म झर्न खोजे तर उनले मलाइ आज मेरोमा जाउँ भनेर कर गरिन् तर म उनको कुरामा सहमत भएन । तै पनि उनले मलाइ धेरै कर गरेपछी हामी दुबै जना उनको घरतर्फ प्रस्थान गर्यौ । करीब आधा घण्टाको गाडीमा यात्रा गरेपछी हामी उनको घरमा पुग्यौँ ।
उनको घर सानो चिटिक्क परेको कम्पाउण्ड सहितको रहेछ । उनले आफ्नो गाडी राखेर ढोकाको बेल बजाइन एकजना लगभग ४० बर्षीया महिलाले ढोका खोलीन् । उनले म तिर इशार गर्दे उहाँ मेरो सोल्टी हो तिमी गएर सुत हामी पछी खान खान्छौँ भनी । ति महिलाले मलाई नमस्ते गर्दे बाटो लागिन् । हामी दुइजना छतको कोठामा प्रबेश गयौ । भित्र कोठा महंगा महंगा सामानहरुले सजाइएको थियो उनले ड्रेस चेन्ज गरेर दुइवटा गिलासमा हुस्की लिएर आइन् अनि चियर्स भन्दै मलाई पिउन आग्रह गरिन् । कुरा गर्दै हामीहरुले हुस्कीको पहिलो प्याक खतम पार्यौँ । त्यसपछि उनले फेरी प्याक लिएर आइन् । मैले उनलाई म पहिला नै पिएको कुरा भनेँ । त्यसपछि मेरो गिलासमा थोरै राखेर आफ्नोमा अली धेरै राखिन् । हामी दुबैलाइ नशाले छोइसकेको थियो । उनले कोठा न्यानो पार्नलाइ हिटर जलाएकी थिइन् । हामीहरु बिच धेरै कुरा भइसकेको थियो । उनले आफ्नो श्रीमान बिदेश भएको हुँदा आफुलाई त्यती टाइम नदिएको गुनासो म संग पोख्दै थिइन । मैले आफु अबिवाहीत भएको कुरा उनलाइ भनेँ ।
उनी र म बिच अब अरुकुरा भन्दा सेक्स सम्बन्धी कुरा हुन थाल्यो । यत्तीकैमा उनले आफ्नो श्रीमानले उनको यौन सन्टुष्टी मेटाउनको लागी नक्कली लिङ पठाइदिएको कुरा गरीन् । मैले उत्सुकताका साथ नक्कली लिङ पनि हुन्छ भनी सोधेँ । उनले मलाइ हेर्ने हो भनी भनिन् । मैले त्यस्तो कुरा कहिले नदेखेको कुरा बताएपछि उनले दराजको ढोका खोल्दै त्यसलाइ झिकेर आफ्नो मुख बाहिर भित्र गराउन थालिन् । अनि मेरो नजिक आएर मेरो पाईन्ट भित्रको भाईलाइ सुम्सुमाउन थालिन् । ममा अनौठो काउकुती जाग्न थाल्यो ।
उनले मेरो पाइन्ट पनि खोलेर एकतिर फालीदिइन् अनि मेरो भाइलाई आफ्नो मुखभित्र बाहिर गर्न थालिन । मलाइ कस्तो कस्तो अनुभव भइरहेको थियो । उनले अप्ठारो मान्न पर्दैन भन्दै टिभीमा ब्लु फिल्म लगाइन् । उनले आफ्नो शरीरको सम्पुर्ण बस्त्र खोलीन् । बेडमा आइ पुनः मेरो भाइसँग उनी खेल्न थालीन् । म पनी उनको स्तनको मुन्टा चुस्दै उनीसँग लडिबडी खेल्न थालेँ । तर मेरो मनमा नक्कली लिङको बारेमा जान्ने कौतुहुलता थियो । मैले उनलाई नक्कली लिङ कसरी प्रयोग गर्नै भनि सोधेँ । अनी प्रयोग गरेर देखाउ भनेँ । उनले मेरो कुरा मानिन् अनि आफ्नो गुलाबी यौनी मलाई देखाउदै त्यसको वरीपरी थुक दल्दै त्यो नक्कली लिङ भित्र बाहिर गराउन थालिन् । म त्यो सबै दृश्य अवाक हुँदै हेर्दै थिएँ ।
उनको यौनीको बरीपरी हलुका रौ थिए अनि त्यसको बिचमा एउटा अटल हिमाल जस्तो गुलाबी रङको चुचुरो थियो । त्यसको केही तल उनले नक्कली लिङ बाहिर भित्र गराउदै थिइन । मैले उनलाई तपाइको रौँ किन यस्तो पातलो भनी सोध्दा उनले बिलेटले मिलाउछु भनी । मलाई पनी त्यो सबै दृश्य देख्दा मनमा काउकुती लागेको थियो । मेरो भाई पनी निकै फुर्तीलो भइसकेकोले म पनि भाइलाई बिस्तारै खेलाउदै थिएँ ।
उनको योनी तिर नजर गाडेको त उनले छिटो छिटो भित्र बाहिर गराउदै थिइन् । यौनीबाट पानी निस्किरहेको थियो । मैले त्यो दृश्य सहन नसकेर उनको हातबाट नक्कली लिङ्ग झिकी आफैले उसको मुखभित्र आफ्नो लाडो छिराएर भित्र बाहिर गराउन थाले । उनको यौनीबाट पानी बगिराखेको थियो । मैले त्यो पानी यसो हातमा लिएको त निकै चिप्लो थियो । उनको मुखबाट अनयासैमा केही शब्दहरु निस्कीएका थिए - आ… आह्ह… आह्ह… आउन्च… मैले उनको चित्कार रोक्नको लागी उनको मुखमा मेरो मुख जोडीदिएँ । उनि निकै उत्तेजित भएकी थिइन् । मैले उनको स्तानका मुन्टामा टोक्दै मेरो हातले उनको यौनी खेलाउदै टिभी तिर नजर दिएको त टिभीमा कुइरेहरुको ब्लू फिल्मको पनि यस्तै दृश्य आइरहेको थियो । यत्तिकैमा उनले प्लिज अब म धेरै सहन सक्दिनँ भन्दै थिइन ।
मेरो भाइ पनि उनको दुलोभित्र छिर्नलाइ बाटो खोजीरहेको थियो । मैले पनि अब धेरै बेर गर्न नहुने ठानेर उनको दुलोको नजिक मेरो भाइलाइ लगेर राखे । यौनीबाट चिप्लो पानी बगेको हुँदा मेरो भाइलाई उनको दुलो खोज्न कुनै गार्हो थिएनँ । एक झट्कामै मेरो भाई उनको यौनी भित्र छिर्यो । जब मेरो भाई भित्र बाहिर गर्न थाल्यो उनको मुखबाट अनौठा शब्दहरु निस्कीन थाल्यो । आ… आह… आह्ह… आह्ह्ह… आह्ह… आह्ह… आह्ह… ओह्ह… उम्म… उम्म… अझै भित्र छिराउ जस्ता शब्दहरु निस्कन थाले । उनी पुर्ण रुपमा बेहोसी जस्तै भएकी थिइन । मैले उनलाई अर्को स्टाइलले दिने बिचार गरेर उनको हात र खुट्टा भुइमा टेक्न लगाएँ । उनी अब पशु जस्तै गरी बसीन । मैले उनलाई पशु स्टाइलले दिन थालेँ ।
त्यसरी मेरो लिङ उनको यौनीमा पस्दा उनको यौनी केही साँघूरो हुन गयो । मलाई अली टाइट भएको अनुभब भयो । मैले बिस्तारै बिस्तारै ठेल्दै थिएँ । त्यसो गर्दा मलाइ सार्है मजा आइरहेको थियो । यत्तिकैमा उनले मलाइ बेडमा उत्तानो परेर सुत्न लगाइन अनि मेरो लिङ चुस्न शुरु गरीन । आहा ! कती मिठो आइसक्रिम भन्दै उनले मेरो लिङ चुस्न थालीन् । म पनि उनको योनीभित्र औला घुसारेर त्यहाँबाट निस्कीएको चिप्लो पदार्थ उनको शरीरमा दल्दै थिएँ । त्यतिबेला त्यहाँको बाताबरण निकै आनन्ददायि थियो मानौँ हामी एक अर्कोमा तृप्त थियौ । त्यत्तिकैमा मैले पुनः उनको यौनी भित्र मेरो लिङ्गको प्रबेश गराएँ । उनी पहिले भन्दा झन् उत्तेजित थिइन । उनले तलबाट नै पेलिरहेकी थिइन् यसो गर्दे मलाइ निकै आनन्द आइरहेको थियो । मलाइ पनि निकै फुर्ती चढ्न थाल्यो । मैले पनि उनलाई स्पीड ल्वाम कि ल्वाम गरेर गर्न थालेँ । सायद हुस्कीको नशाले गर्दा होला मेरो माल पनी झरिरहेको थिएनँ । पुनः उनको मुखबाट शब्दहरु कामुक शब्दहरु उच्चारण हुन थाले fuck… fuck… fast… fast… kill my pussy… yah! yah… fast… fast… मेरो पुती च्यातीदेउ प्लिज… oyes yes…
म उनलाई निकै स्पिडमा दिदै थिएँ । मेरो गति झनै बढ्न थाल्यो । मैले सोचे अब मेरो माल झर्छ होला भनेर । उनी पनि सिथिल हुँदै गएकी थिइन् । यत्तिकैमा मैले मेरो भाइलाई उनको यौनीबाट बाहिर झिकेर उनको मुखको नजिक लगेर एक झड्का मारेको भाइले बमिट गर्न थाल्यो । उनले झट्ट मेरो भाइलाई आफ्नो मुखमा लगी । मेरो बिर्य सबै निलिन । त्यसपछी हामी दुबै शिथिल भयौँ । दुबै जन करिब १५ मिनेट जति बे‍डमा अचेत जस्तै भएर लडिराख्यौँ । त्यसपछी उनले मलाई नुहाउन जान आग्रह गरीन् । मैले उनलाइ सँगै नुहाउने कुरा गरेँ । हामी दुबै बाथरुमभित्र प्रबेश गर्यौँ । त्यहाँ पनि हाम्रो रामलिला शुरु भयो । बाथरुममा उनले सबैभन्दा पहिला मेरो भाइलाइ धोइदिइन् । मेरो राजा नै यही हो । ल ल बाबुलाइ म नुहाइदिन्छु ल ल ल भन्दै उनले मेरो भाइलाई नुहाइदिन थालिन् । मैले पनि उनको योनीमा साबुन लगाई राम्रोसँग धोईदिएँ अनि उनको सम्पुर्ण शरीरमा एक पटक किस गरेँ । उनको यौनीको दुलोमा मेरा औला पस्दा फेरी मेरो भाइले उनको दुलो खोजेजस्तो गर्न थाल्यो । मैले उनको स्तनको मुन्टा निकै बेर चुसेँ । उनले कस्तो बच्चा जस्तो बुबु खाइराखेको अरु पनी केही खाउन भनिन । मैले उनलाई त्यही ठडाएर नै दिन थालेँ । त्यहाँ एक सट पुरा गरी हामी नुहाएर बाहिर आयौँ । खाना खाएर हामी पुनः बेडरुम तिर फर्कियौँ । त्यो रात मैले उनलाइ पाँच पटकसम्म बिभीन्न स्टाइले दिएँ । मलाइ निकै आनन्द अनुभब भयो । बिहान ९ बजे मात्र म उठेँ । अनि उनले चिया लिएर आइन् । हामी दुबैले चिया पियौँ । मैले अब म जानुपर्छ भन्ने कुरा उनी समक्ष राखेँ । मलाई उनि देखी केहि लाज लागेको थियो । उनले आफैले गाडीमा पुर्याइदिने कुरा गरीन् तर म आफै जान्छु किन बेकार दुखः गर्नुहुन्छ भन्दा उनले रातभर मेरो लागी दुखः गर्यो म पुर्याइदिन्छु नि भनि । तर म आफै जान्छु भनेर म हिड्न लागेँ । उनले एउटा पेपरमा आफ्नो मोबाइल नंबर लेखेर दिइन् अनि म बसेको होटेलको फोन नंवर मागिन् । मैले पनि उनलाई फोन नं दिएँ । उनले मलाइ फेरी भेट्ने बाचाका साथ दराजबाट केही पैसा झिकेर मेरो खल्तीमा राखिदिइन् । मैले पैसा लिन मानिन उनि रिसाउदै मलाइ गाली गरिन् मैले पनि आरामको कमाइ सम्झि लिएँ । उनले good bye भन्दै मलाई किस गरिन् । मेरो भाई फेरि जुर्मुराउँदै उठ्न थाल्यो । मैले उनलाइ किस गर्दे बेडमा लडाएर पुनः काम सुरु गरेँ । खै बिहान भएर हो की मेरो माल छिट्टै झर्यो । उनले तौलीयाले मेरो भाइलाइ पुछिदिइन अनि म आफ्नो बाटो लागेँ । ट्याक्सी लिएर म होटेलमा आएँ । होटेलमा आएर उनले दिएको पैसा हेरेको त दस हजार रुप्या रहेछ । म निकै खुसी भएँ । मन मनमा अजिङगरको आहारा दैबले जुराउने रहेछ भन्दै खाना खानालाई तल झरेँ ।
ब्रिटिस लाहुरेको बुढीलाई मज्जाले चिकियो, दस हजार पनि कमाइयो 2017-06-28T22:52:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
18+ story Adult Literature adult xxx story erotic story fucking story Nepali Sex Story Sex Story चिकेको कथा नेपाली युवा साहित्य नेपाली सेक्स ब्लग यौन कथा लाहुरेको बुढी चिकेको कथा
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: ब्रिटिस लाहुरेको बुढीलाई मज्जाले चिकियो, दस हजार पनि कमाइयो